မတရား ကြီး မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲလေးလားးးး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မတရား ကြီး မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲလေးလားးးး
မတရား ကြီး မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲလေးလားးးး
Posted by wunna on Jul 27, 2010 in Myanma News |2comments
အခု လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို တရားမျှ တစွာလုပ်ပေးမယ်ဆိုပဲ။
ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ မတရားကြီး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲကြီး ထပ်လာတော့မယ်။ အသေအချာကို လာတော့မှာပါ။
လမ်းခင်းပေးမည်ဟုဆိုကာ ကြံဖွံ့ပါတီ ကြိုတင်မဲ ကောက်ခံ
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေါပုံမြို့နယ်တွင် စစ်အစိုးရ ထူထောင်ထားသော ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီသည် လမ်းခင်းပေးမည်ဟုဆိုကာ ပါတီဝင် အရေအတွက်တိုးရေးနှင့် ကြိုတင်မဲရရှိရေး ကြိုးပမ်းလျှက် ရှိသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
စည်းရုံးရာတွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီက လမ်းခင်းပေးမည်ဖြစ်ကာ အပြန်အလှန်အားဖြင့် လမ်းထဲတွင်နေသူများက ကြံ့ဖွံ့ပါတီသို့ ဝင်ရောက်လိုက ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ကြိုတင်မဲ ၁၅ မဲ အနည်းဆုံး ပေးအပ်ဖို့လိုသည်ဟု တောင်းခံနေသည်။
”ကျနော်တို့ကလည်း ကိုယ့်ရပ်ကွက်လမ်းတွေ ကောင်းဖို့အတွက် မဲပေးရတာက အပမ်းမကြီးဘူးလေ၊ ပေးကြမယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျနော်တို့ ရပ်ကွက်မှာ လမ်းပေါင်း ၁ဝ ကျော်ရှိတယ်၊ အဲဒီမှာ လမ်းပေါင်းကတော့ အများကြီးပဲပေါ့လေ၊ ပြောရရင် ရပ်ကွက်တခုစီမှာ အဓိက လမ်းတွေ တလမ်းစီလောက်ကို ကတ္တရာ လမ်းခင်းပေးတော့မယ် ပြောတယ်။ အခု မဲကောက်လို့ရတဲ့ လမ်းတွေကို အရင်လုပ်ပေးမယ်တဲ့” ဟု ဗိုလ်ထွန်းစံ ရပ်ကွက်သား တဦးက ပြောသည်။
လမ်းခင်းပေးသည်မှာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ အမည်ခံခြင်းသာဖြစ်ပြီး၊ မြို့တော်စည်ပင်က တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု စည်ပင် အရာထမ်းတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်က ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လမ်းပေါင်း၃ဝဝ ကျော်ရှိနေရာ ကျန်ရှိနေသေးသော လမ်းများအားလုံး ပြင်ဆင်မှုကို ကြံ့ဖွံ့အမည်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးအောင်သိန်းလင်းက ညွှန်ကြားထားကြောင်း သူက ပြောသည်။
မဇ္ဈိမက ရရှိသော စည်ပင်ဌာနစာရင်းများအရ ယခုနှစ်လမ်းပြုပြင်မှုအတွက် ဘတ်ဂျတ်ငွေ ဘီလီယံပေါင်း ၃ဝ ကျော်ကို လျာထားမှုရှိရာ ယခင်နှစ်ကထက် ၁ဝ ဘီလီကျော် တိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်နှစ်က စည်ပင် နယ်နမိတ်အတွင်း လမ်း ၂ဝဝ ကျော် ဖောက်လုပ် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အလားတူပင် ပဲခူးမြို့တွင်လည်း ယခင်ကြံ့ဖွံ့အသင်းဝင်များထဲမှ အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ မိသားစုဝင်များကို ဦးစွာ စည်းရုံးကာ ပါတီဝင်တိုးရရေး လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု သိရသည်။
ပဲခူးမြို့ခံ တဦးက “ပါတီဝင်ကြေး ၁ဝဝဝ ကျပ် သတ်မှတ်ထားတော့ အဆင်ပြေရင် ပေးလည်း ရတယ်။ မပြေရင် နောက်မှ ပေးလည်း ရတယ်။ မပေးနိုင်လည်း ရတယ်လို့ ပြောတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ကျေးရွာအချို့တွင်မူ ကျေးရွာ အာဏာပိုင်များနှင့် ကြံ့ဖွံ့ စည်းရုံးရေးမှူးများသည် ပါတီဝင်များ ရရှိရေးအတွက် တအိမ်တက် တအိမ်ဆင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ယူကာ ပါတီဝင် လျှောက်လွှာတွင် လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီး အဓမ္မ စုဆောင်းနေကြောင်း ပဲခူးမြို့ ကျောက်တွင်းကုန်း ရပ်ကွက်နေသူ တဦးက ပြောသည်။
“ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အနိုင်ရမှ နောက်ဆိုရင် အာဏာသိမ်းတာတွေ မဖြစ်တော့ဘူး။ သူတို့ အနိုင်မရရင် အာဏာသိမ်းတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီး အဲလိုတွေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်ပြောတယ်” ဟု စည်းရုံးခံရသူတဦးက ပြောသည်။
သို့သော်လည်း ပဲခူးမြို့ ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်အချို့ကို ပါတီဝင်အဖြစ် စုဆောင်းနေသော်လည်း မြို့ထဲ ရပ်ကွက်များတွင် စုဆောင်းခြင်း မတွေ့ရသေးပေ။
ကြံ့ဖွံ့စည်းရုံးရေးမှူးများ၊ ကျေးရွာရပ်ကွက် အာဏာပိုင်များနှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများက မိုးရာသီတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် ရေမြောင်း တူးဖော်ခြင်း၊ ခြင်ဆေး ဖျန်းပေးခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် ပါတီဝင်ရောက်ရန် စည်းရုံးမှုများလည်း ရှိနေသည်။
ထို့အပြင် ဒုတိယ ပညာရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်မျိုးမင်းသည် ရန်ကုန် နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများကို သွေးထွက်သံယိုမှုများဖြစ်ရန် မလိုလားသည့်အတွက် စစ်တပ်နှင့် ပတ်သက်သည့် ပါတီကို မဲထည့်ရန် ယခုလ ၂ဝ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သေးသည်။
လူမှုရေးအသင်းအဖြစ် ထူထောင်ခဲ့သော ကြံဖွံ့အသင်းသည် ယခုလ ၆ ရက်နေ့တွင် ဖျက်သိမ်းကာ ပါတီအဖြစ် ကြေညာခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကလည်း ၎င်းပါတီကို မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ကြံ့ဖွံ့အသင်း စည်းရုံးရေးများက ပါတီစည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ပြီး မြို့နယ်အဖွဲ့ဝင်များက အလိုအလျောက် ပါတီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သွားကြသည်။
Burmese people must united in their boycott of election which is definitely unfair advantage for dictators and co. The West, European union, Useless Nations/ UN, China, Russia and Asean had clearly stated that Burmese people are the only deciders in choosing their political future of their country. The Junta will cheat all the way to their victory in this election. No one should have any doubt about it. Defenceless people at the mercy of murderous dictators can not come out to the streets again to show their discontent of current social hardship. Dictators will shoot you directly to quell the demonstration. It is waste of valuable lives. We have to learn the lessons. No way we can come out into streets again knowing that we got nothing out of it. The only way is to show your disapproval of unfair election by boycotting the election in 50 millions. Declare no go area for one mile radius of polling station on election day. Show the world that no one vote on election day. The D day of the country is coming soon. Only then your verdict will be recognized by all leading nations. Than Shwe will not be able to cheat if he sees none at polling station. This is your last chance. Boycott the election.
သူလိမ် ငါလိမ် သူလိမ် ငါလိမ်
– – ဗြောင်လိမ် – – ဗြောင်လိမ်
နဲ့ နောက်တော့ ………………. အစိုးရသွားတာဘဲ
ငါပေးခဲ့တဲ့မဲနဲ့ ……………. တနေ့ ငါ့တို့ကို ဆော်မှာဘဲ
ငါးစာကို ဘဲမြင်ရင်တော့ —— ခံကြ ခံကြ